Bhii Diki rechiHebheru Rinosimbisa Kutenda Kwedu—Yod
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mongolian Moore Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngangela Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Venda Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Zita raMwari rekuti Jehovha muchiHebheru, uye rinoverengwa uchibva kurudyi uchienda kuruboshwe
Unonyatsobvuma here kuti zvinhu zvinovimbiswa naMwari zvichaitika? Jesu ainyatsozvibvuma, uye zvaaidzidzisa zvakaitawo kuti vanhu vaimuteerera vatende muna Mwari. Chimbofunga zvaakataura paMharidzo yepaGomo, zviri pana Mateu 5:18: “Chokwadi ndinoti kwamuri nokukurumidza denga nenyika zvingapfuura, pane kuti bhii rimwe chete duku pane ose kana kuti kachikamu kebhii kapfuure paMutemo zvinhu zvose zvisina kuitika.”
Bhii dikisa paarufabheti yechiHebheru, ndi י (yod), uye ndiro bhii rekutanga pazita raMwari rekuti Jehovha. * Uyezve, vanyori nevaFarisi vaisangogumira pakukoshesa mashoko kana kuti mabhii aiva muMutemo waMwari, asiwo vaikoshesa kunyange “kachikamu kebhii.”
Jesu aiti denga nenyika zvingapfuura pane kuti kanhu kadiki kanotaurwa mubhuku reMutemo katadze kuzadzika. Asika, Magwaro anoti matenga nenyika zvatinoona izvi hazvisi kuzoparadzwa. (Pisarema 78:69) Saka mashoko aya anoratidza kuti chinhu chese chinotaurwa muShoko raMwari chinototi chiitike.
Mwari anokoshesa kunyange zvinhu zvidiki here? Ehe. Chimbofunga izvi: VaIsraeri vakaudzwa kuti pavaidya gwai rePaseka, hapana kana bhonzo raifanira kutyorwa. (Eksodho 12:46) Chingaita sechinhu chidiki uchizvitarisa. Vainzwisisa here kuti zvairevei? Vanogona kunge vaisazvinzwisisa. Jehovha Mwari aiziva kuti zvaakavaudza izvi, hwaitova uprofita hwekuti hapana kana bhonzo raMesiya raizotyorwa paaizourayiwa padanda rekutambudzika.​—Pisarema 34:20; Johani 19:31-33, 36.
Zvakataurwa naJesu zvinotidzidzisei? Isuwo tinogona kuva nechokwadi chekuti chese chinovimbiswa naJehovha Mwari chichaitika, kunyange chingava chidiki sei. Chokwadi bhii diki rechiHebheru rinosimbisa kutenda kwedu!
^ ndima 3 Bhii dikisa paarufabheti yechiGiriki ndi ι (iota) uye rakafanana nebhii rechiHebheru י (yod). Sezvo Mutemo wakapiwa Mosesi wakanga wakanyorwa muchiHebheru, kunenge kuti Jesu aitaura nezvebhii rechiHebheru.